Kowona Best Christmas Markets By Train | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Kowona Best Christmas Markets By Train
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 24/07/2020)
Christmas Markets ngu Train kunceda singene ngeKrismesi kunye uhambo ukuya kwesinye sezixeko best eYurophu. Iindawo ezinika umdla ngololiwe uze wenze amava akho kakhulu omlingo ngonaphakade! abaninzi izitishi ibekwe entliziyweni kombindi wedolophu, ngokwenza ukuhamba ngololiwe indlela elula ukufika oya kuyo. Enoba uza uyothenga izipho intsapho, isampula i iwayini mulled okanye ukonwabela nje emoyeni Christmas nabantu obathandayo, uqinisekile ukuba ayilibale iholide. Siye ihlanganiswe ambalwa best iimarike Kowona Christmas ngololiwe ukuba akuyi ufuna kuphoswa.
Elinye lawona maxesha omlingo enyakeni ukuya kutyelela Italy na ngexesha leKrisimesi. Thatha uloliwe ku Florence kwaye ubone ezikhumbuzo yamandulo ibengezela izibane Christmas unuke chestnuts kaJohn emoyeni.
Naples ku Florence Uqeqesha
A lorhwebo oludumileyo ukuba tyelela e Florence yi Piazza Santa Croce e Florence. Oku izele nezitali zeentlobo amahle somthi kwaye waziwa ngokuba imarike German Christmas emveli. Piazza Santa Croce yindawo ogqibeleleyo kulanda izipho ezizodwa kwaye izibiliboco zendawo.
Phawula ekuqaleni kwalo Markets Christmas ngu Train kunye uhambo ngololiwe ukuya eLondon. London lizele nomxhelo iKrismesi ukususela kuNovemba ukuya kuJanuwari. Ndwendwela eLondon ubusika bube kwiSikolo iHyde Park ubone imithi ezihonjiswe zibane iintsomi, a enkulu Ukuskiya ngaphandle salo, kwevili Ferris, UCarol singers and ngaphezu kakhulu ngaphakathi emarikeni. Kukho iimarike ezininzi ezincinane ukukhetha ukusuka malunga Imbali National eLondon Museum apho ukugcina kufudumele mnandi zasebusika emoyeni iglasi glühwein kunye ukutya zehlobo. Plus, ne kumnandi yokuya apho ngololiwe ukuya eLondon, wena uya kuba imali engaphezulu bethenga ngaphezulu!
Iindawo ezinika umdla iimarike ndisangqengqile Christmas ngololiwe!! Berlin ziyasebenziseka kalula uloliwe eYurophu nto leyo yenza okokuba indawo ephelele. Fumana ubutyebi bembali kunye umdla ikomkhulu German kaThixo, kwakunye namanye amaziko ezahlukahlukeneyo Christmas, ne zonyaka best shopping, imicimbi kunye iyathanda culinary!
Gendarmenmarkt ke kufuneka ubone! Nalencoko ibonwa njengenye elihle kakhulu iimarike Christmas Berlin kaThixo. Ngcamla ezinye ephatha zasekuhlaleni ezifana gingerbread, chestnuts yosiwe, mulled iwayini kunye ayi ukuze ekugqibeleni amava Christmas German.
Prague, Umphakathi waseCzech
Ngokwahlukileyo kwezinye iimarike ezinkulu kulo lonke elaseYurophu, the Prague Christmas Markets by Train offers more authenticity and comfort. market nganye isimo ayilibale. Imizuzu ukusuka kwisikhululo sikaloliwe engundoqo ukuba eqaqambileyo zinokuhonjiswa kwizindlu ngomthi kwi square Old Town Prague kaThixo. Apha balapha kunye nabatyeleli ndawonye ukuze fillers lelonani, zokudlala yeplanga, Christmas izihombo imithi, izinto isandla-ezenziwe, kanye anuka namakhandlela.
Ukhetho kokutya neziselo ethengiswa emarikeni onesisa kakhulu. Iindwendwe bakhangele phambili ukutya yemveli Czech nje inyama yehagu nkuzi, muffins Czech, conkers, ibhiya, lokucinga, kunye nezinye amakhono ezithile ukusuka Cuisine Old Czech. Kukho into ekhethekileyo kakhulu malunga emarikeni iKrismesi e Prague. Silandele ku Twitter yaye Facebook ukuba mayihlale ukukezo yethu.
Nandipha ikhefu lesixeko ngololiwe kwiholide yeVienna! Vienna sisixeko nostalgia kunye romance kwaye unikeza engcono kakhulu Christmas Markets eYurophu. the Isikhululo sikaloliwe Yimizuzu kuphela ngeteksi okanye ibhasi ukusuka kumbindi wesixeko leyo eyenza Vienna kaThixo Christmas Markets ngu Train lula ukufikelela. Ethandwa market kulo mzi capital lwenzeka kwi Rathausplatz, apho isikwere kakuhle akhanyiswe zizibane kwelihlo kunye nomthi walo indumezulu Christmas.
Zama Punch okumnandi kunye iilekese yesintu njengoko ukhangele asesitalini ukuba okomzuzwana imeko izipho kunye nezinto nokuhombisa, nayo yonke ngokuhlwa ixilongo live Ikonsathi lwenziwa evela Rathaus balcony, le yindlela entle kakhulu ukuphelisa usuku ogqibeleleyo.
Yenza le Christmas ukuyikhumbula ndandityelele elinye iimarike zeKrismesi ngokungaqhelekanga eYurophu ngololiwe. Incwadi itikiti lakho online ukusebenzisa imali Finder zethu ziwonga kakhulu kwangaphambili.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-christmas-markets-by-train/ - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
#market #newyear #noel Krisimesi ChristmasbyTrain